Ankaraobato : Lehilahy maty voatifitra teo amin’ny tendany – Midi Madagasikara
You Are Here: Home → Faits-Divers → 2013 → novembre → 25 → Ankaraobato : Lehilahy maty voatifitra teo amin’ny tendany
Ankaraobato : Lehilahy maty voatifitra teo amin’ny tendany
Redaction Midi Madagasikara 25 novembre 2013 Ankaraobato, maty voatifitra
Ny alin’ny asabotsy teo dia nitrangana fanafihana mitam-piadiana maromaro tamin’iny Atsimon-drano iny. Vola an-tapitrisany no voaroba ary olona roa no notifirin’ireo jiolahy ka namoy ny ainy ny iray araka ny fanadihadiana nataon’ny mpitandro filaminana dia andian-jiolahy iray ihany izy ireto.
Imerimanjaka. Ny fanafihana voalohany dia nitranga tao Imerimanjaka – Ambohijanaka. Ny alin’ny asabotsy, tokony ho tamin’ny 10 ora alina dia nisy dimilahy tsy nisaron-tava ary nitondra kalachnikov sy Pistolet Automatique nanafika iray. Niditra an-keriny tao an-trano ireo jiolahy ary nandroba 120.000 ariary sy finday dimy. Nisy tokantrano iray hafa ihany koa teo akaiky nidiran’ireo jiolahy. Niakaran’izy ireo ny tamboho ary nopitsohany ny varavarana no sady nanapoaka basy izy hampitahorana ny tao an-trano. Lasan’izy ireo tamin’io trano io ny vola 300.000 ariary.
Dorodosy. Fotoana fohy taorian’izay dia nifindra tao Dorodosy ireto andian-jiolahy ireto ka trano fisakafoanana sy fandraisam-bahiny no notafihan’izy ireo. Moto scooter, finday telo ary fitaratry ny fiara P. 205 teo antokontany no nalain’ireo olon-dratsy. Mbola nanapoaka basy ihany koa ireto mpanafika ireto, ka voatifitra ny tovolahy iray izay niafina tao ambony rihana. Teo amin’ny sorony no voa ka nalefa haingana teny amin’ny hopitaly izy notaboina.
Ankaraobato. Tokony ho tamin’ny misasakalina dia nifindra teny Ankaraobato – Ankadilalampotsy indray ireo jiolahy. Niditra an-keriny tao an-trano ka raha vao nahita azy ireo ilay raim-pianakaviana dia saika hanohitra, saingy tifitra no navalin’ireo jiolahy azy. Voa teo amin’ny tendany ity rangahy 45 taona ity, ary tsy nivoaka ny bala fa nidina any amin’ny kibony. Maty tsy tra-drano moa ilay lehilahy. Vola 1.600.000 ariary sy finday no nalain-dry zalahy. Tao an-trano ihany dia nifampizara ilay vola ireo mpanafika ary saika raikitra ady mihitsy aza.